Ọzụzụ Cook / Kitchen ọrụ (nkuzi oge-oge)
Na-arụ ọrụ na kichin
Anyị na-enye agụmakwụkwọ dị ala
Nyere nri & esi nri
Ụlọ ọrụ anyị na-enye mma, ihe na ihe oriri
Onye na-arụ ọrụ na kichin maara ihe niile gbasara usoro ịcha. Ị na-akwadebe nri. Ị ga-amụta usoro ndị dị na kichin. Onye na-arụ ọrụ na kichin na-arụkarị ọrụ nri nri na obere ụlọ nri.
Ị nwere ike isonyere anyị ubre esi nri mezuo. Dịka osi nri, ị nwere ike ịkwadebe ma dozie onwe gị onwe gị. Ị mụtara otú e si ejikọta ihe ọkụkụ ma ị mụta ịkọ ọnụahịa nke efere. Ọ bụrụ na ị nweta akwụkwọ nri onye isi nri, ị nwekwara ike ibute ụzọ na ụlọ oriri na ọṅụṅụ nke ụlọ oriri na ọṅụṅụ.
Ị bụ onye egwuregwu
Ị maara isiokwu gị
Ị nwere agụụ maka nri
Ọzụzụ esi nri na-ewe na nkezi abụọ ruo afọ ise.
Ị na-amalite na onye ọrụ nchịkọta ọkụkụ.
Na akwụkwọ nke onye ọrụ kichin Ị kwenyesiri ike banyere ọrụ?
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịkọwapụta, ị nwere ike ịnọgide na-arụ ọrụ dị ka HELPKOK na mgbe e mesịrị dị ka KOK.
KOKS nwere mmasị na ahia.
Ịkwesighi ihe ọ bụla pụrụ iche tupu ị mara maka enyemaka (Nyere aka).
N 'AWỤKWỌ AHỤ
Resto Ruggeveld bụ ụlọ oriri na nkwari nke mmụta Horeca nke Gaa! Ụlọ ihe nkiri. Ebe ọhaneze ebe gị onwe gị kwa nwere ike ịbanye na tebụl.
Ọzụzụ na Nchịkọta nri na Enyemaka Cook zuru ezu
Ihe omume ahụ 'onye na-arụ ọrụ kichin aka'bụ usoro ihe omume na nri ma na-agụnye usoro ndị a.
Mbido kichin ime ụlọ: ị mụtara ịrụ ọrụ ịkwadebe (ebe-en-ebe); kwadebe ihe oriri, ụkọ akụkọ, dozie akwụkwọ nri na mkpụrụ osisi.
Usoro akụrụngwa usoro: ị na-amụta nkeji dị arọ ma gbanwee ọdịnaya, ịkwanyere mmekọrịta ùgwù, jiri ngwaọrụ ndị nkụ maka usoro dị iche iche ma jiri igwe kichin mee ihe. Ị na-amụta itinye usoro kichin n'ọrụ; na-esote ezi ntụziaka, na-eji ngwa nri kichin, na-akwadebe ala ala na nri, uwe, ...
Ngwá ọrụ kichin usoro: Ị mụta ịhazi ihe oriri, gbakọọ ọnụahịa, na-echekwa ihe oriri dịka ihe ndị dị mkpa dị mkpa dị mkpa, ịkwadebe ọrụ ịkwadebe ihe (ebe-en-ebe), debe iwu na ịdị ọcha na kichin, ...
Nri nke nri uzo: Ị ga-akwadebe nri na ihe eji esi nri, usoro nkwadebe maka azụ na anụ (ihicha, ntinye akwụkwọ), ịgbaso ntụziaka, ịgụ akwụkwọ ego, mgbakwasa, ...
Ngwunye Hot Kitchen Preparations: Ị na-amụta ịgbaso ntụziaka, tinye usoro isi nri, mgbakwasa, ...
N'ikpeazụ, ị nwere ike ịkwado dịka onye nnyeaka aka nri ma ọ bụ esi nri.
Enwere ike inweta ihe omumu a. A ga-enye gị akara ugwo nke ụlọ ọrụ ma ọ bụrụ na i mechara ihe niile. Ị na-amụta ma na ọrụ ma n'ụlọ akwụkwọ. A na-akpọ nke a mmụta abụọ.
Kedu ihe ị na-amụta na onye ọrụ ugbo ụlọ nri?
Ị na-aga n'ihu ịzụlite ihe ọmụma bụ isi iji kwadebe ihe oriri dị iche iche dị na ya "à la carte". Ị ga-amụta na cookie esi arụ ọrụ na kichin.
Kedu banyere onye ọrụ nri ụlọ nri gị?
Ị nwere ike ịmalite isi nri dịka osi nri na nnukwu kichin, ụlọ oriri na ọṅụṅụ, ụlọ ahịa nri ma ọ bụ ụlọ oriri na ọṅụṅụ.
Ịnwekwara ike ịnweta akwụkwọ nke njikwa azụmahịa na usoro ihe omume ahụ. Na akwụkwọ a ị nwere ike ịmalite dịka onye na-eri nri ụlọ nri.
Nkụzi anyị na-esi esi nri bụ ọnụ ala. Ikwesighi itinye ego na mma di onwe gi. Ụlọ akwụkwọ ahụ na-enye ihe niile ịchọrọ. Ọ bụrụ na ị na-arụ ọrụ ụbọchị atọ n'oge ị na-azụ ọzụzụ, i nweta ego. Ị nwere ike ijikọta akwụkwọ anyị na ezinụlọ gị. Oge agụmakwụkwọ bụ ihe mmụta na-enye gị ohere ijikọta ọrụ na mmụta.
Kristel Guttermann - Onye na-arụ ọrụ na ọrụ
kristel.guttermann@spectrumschool.be - 03 / 360 26 37